अध्ययनले उत्कृष्ट लेखन : तामाङ -
स्रष्टा विष्णुमाया तामाङ, भूटानी शरणार्थी शिवर बेलडाँगी–२ मा बस्छिन् । कक्षा १२ मा अध्ययनरत उनी तेस्रो मुलुक पुनर्वासका निम्ति पनि तयारी गरिरहेकी छिन् । तीन वर्षयता गजल लेखनमा क्रियाशील उनले हालसालै गजल पुस्तक ‘मेरो जीवन’ बजारमा ल्याएकी छिन् । तामाङसँग भूटान दर्पणका लागि गरिएको स्रष्टा वार्ता प्रस्तुत छ :
गजल नै किन लेख्न मन पर्यो ?
– अग्रजहरुको प्रेरणा, गजलको सरलता, गहनता र व्यापकताले मलाई साहित्यका अरु विधा भन्दा गजलले नै बढी तान्यो, त्यही भएर ।
कतिपयले त जीवनमा अरु काम गर्न नसक्नेहरु मात्रै लेखक, साहित्यकार, कवि आदि हुन्छन् भन्छन् नि ! तपाईको विचारमा ?
– मेरो विचारमा अरु सबै काम जो कसैले सहजै गर्न सक्छन् । तर, अध्ययन, चिन्तन, लेखनका माध्यमबाट समाज, मानवता र युगको सन्देश दिनु भन्नु अन्य कामहरु भन्दा फरक र गहन कार्य हो । सबै उत्कृष्ट लेखक हुन नसक्लान्, त्यो बेग्लै कुरो हो । तर, लेखन आफैमा अरु आम कार्यहरु भन्दा गहन कार्य हो । त्यसैले विश्वभरका थोरै मात्रै मान्छे लेखक भएका छन् ।
उसो भए साहित्यलाई कसरी परिभाषित गर्नु हुन्छ ?
– साहित्य समाजको ऐना त हो नै । साथै यो, त्यो युगको साँक्षी पनि हो, जुन युगमा कुनै पनि साहित्य लेखिन्छ । साहित्यसँगै युग र त्यसले जन्माएको इतिहास पनि बाँचेको हुन्छ ।
उसो भए आगामी दिनमा लेखनलाई कसरी निरन्तरता दिने सोच्नु भएको छ ?
– लेखनलाई जीवन र जगतका बारेमा बुझ्नका निम्ति साधनका रुपमा लिएको छु । म जहाँ पनि जान्छु, तर लेखनबाट अलग रहने छैन ।
अनि पुस्तक नै ‘मेरो जीवन’ भनेर प्रकाशन गर्नुभयो । के छ पुस्तकमा ?
– पुस्तकमा वास्तवमा जीवन खोजिएका गजलहरु छन् । र यो पुस्तकमा मेरो निजी नभएर आम पाठक, ज–जसले पढ्नु हुन्छ उहाँहरुले आफ्नै जीवनका पाटाहरुलाई पढ्न पाउनु हुनेछ ।
युवा पुस्ताका लागि लेखन कतिको महत्वपूर्ण छ ?
– वास्तवमा यतिबेला अध्ययनको विकल्प अरु केही पनि छैन । अध्ययनको वास्तविक मापन अभिव्यक्तिले गर्दछ । त्यसकारण सहज अभिव्यक्तिका लागि लेखनको थप महत्व छ । जसले जति धेरै अध्ययन गर्छ उसले नै उत्कृष्ट लेखनमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्दछ ।
टी–२० क्रिकेट विश्वकपमा विजयी सुरुवात कमन देवान नेपाल, दमक / इतिहासमै पहिलो पटक टी–२० विश्वकप क्रिकेट खेलेको पुगेको नेपालले आइतबार हङकङ विरुद्धको खेलमा विजयी शुरुवात गर्दै इतिहास रचेको छ... Read More